Koorsada Kitaabka Quduuska ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland
CARUURTA Kitaabka Quduuska ah (12 casharro)
Kitaabka Quduuska ah - Ereyga Ilaah?
Qorniinku waa Erayga Eebbe ee la waxyooday, maragga aaminka ah ee Injiilka, iyo muujinta runta ah ee saxda ah ee muujinta Ilaah ee dadka. Marka tan la eego, Qorniinka Quduuska ahi waa mid aan macquul ahayn oo aasaas u ah kiniisadda dhammaan su'aalaha wax dhigista iyo nolosha ”(2 Timoteyos 3,15: 17-2; 1,20 Butros 21: 17,17; Yooxanaa).
Qoraa warqad u ah Cibraaniyada ayaa sheegaya oo ku saabsan habka ...
Marka loo eego maraggii Qorniinka, Ilaah waa ilaah rabaani ah saddex daa'im ah, isku mid ah laakiin shaqsiyado kala duwan - Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Isagu waa Ilaaha keliya ee runta ah, weligiis waara, oo aan la beddeli karin, wax walba awood u lahayn, wax walba yaqaan, oo meel walba jooga. Isaga waa Abuuraha cirka iyo dhulka, dayactirka caalamka iyo isha badbaadada dadka. In kasta oo uu yahay ku-meel-gaadh, haddana falal ...
Ilaah, Wiilku, waa qofka labaad ee ilaahnimada, oo uu abuuray aabuhu da’ado ka hor. Isagu waa erayga iyo u ekaanta Aabbaha, oo isaga xaggiisa ayuu wax walba uumay. Waxaa laga soo diray Aabaha sidii Ciise Masiix, Eebbe, oo loogu muujiyey jidhka inuu awood inoo siiyo badbaadada. Waxaa helay Ruuxa Quduuska ah oo ku dhashay Maryantii bikradda ahayd ...
Injiilku waa warka wanaagsan ee ku saabsan furashada xagga nimcada Ilaah ee ku saleysan rumaysadka xagga Ciise Masiix. Farriinta ayaa ah in Masiixu u dhintay dembiyadeenna aawadood, in la aasay, oo la sara kiciyey maalintii saddexaad ka dib Qorniinku, ka dibna wuxuu u muuqday xertiisii. Injiilku waa warka wanaagsan ee ah in shaqada badbaadada Ciise Masiix aan ku geli karno boqortooyada Ilaah ...
Ruuxa Qudduuska ahi waa qofka saddexaad ee ilaahanimada weligiisna wuxuu ka yimaadaa xagga Aabbaha xagga Wiilka. Isagu waa gargaaruhu wuxuu ballanqaaday Ciise Masiix inuu Ilaahay u soo diray dhammaan rumaystayaasha. Ruuxa Quduuska ahi wuu inagu dhexjiraa, wuxuu inagu mideeya aabaha iyo wiilka, wuxuuna noogu beddelaa tawbadkeen iyo isdaahirinta iyo cusboonaysiinta joogtada ah ee aan kula jaan qaadno muuqaalka masiixa. Ruuxa Quduuska ahi waa ...
Dembigu waa sharci-darro, oo waddan ka soo horjeedaa Ilaahay. Tan iyo wakhtigii dembigu dunidan yimid Aadan iyo Xaawo, binu-aadmi wuxuu ku hoos jiray harqoodkii dembiga - harqood la saari karo oo keliya nimcada Ilaah ee loo maro Ciise Masiix. Xaaladda dembiga ee bini-aadamka waxay muujisaa isu-ekaanshaha naftiisa iyo danaha gaarka ah ee ku saabsan Ilaah iyo doonistiisa ...
Baabtiiska biyo - waa calaamad tawbadkeenka rumaystaha, waa calaamad muujinaysa inuu aqbalayo Ciise Masiix inuu yahay Sayid iyo Bixiyaha - waa ka qaybgalka dhimashada iyo sarakicidda Ciise Masiix. Ku baabtiista "Ruuxa Quduuska ah iyo dab" waxaa loola jeedaa shaqada cusboonaysiinta iyo nadiifinta ee Ruuxa Quduuska ah. Kaniisadda Adduunka ee Ilaah waxay ku dhaqantaa baabtiisidda nipasẹ baabtiisyada (Matayos 28,19; ...
Kaniisadda, oo ah Jidhka Masiixa, waa bulshada dhammaan kuwa rumeysan Ciise Masiix ee Ruuxa Quduuska ahi ku dhex nool yahay. Hawsha Kaniisadda ayaa ah wacdinta injiilka, in la baro wax walba oo Masiixu ku faray, baabtiiskii, iyo daaqsintii adhiga. Marka la fulinayo amarkan, Kaniisadda, oo uu ku hoggaamiyo Ruuxa Quduuska ah, ayaa Kitaabka Quduuska ah u haysa tilmaam oo isu hanuuniya ...
Malaa'igtu waa jinniyo abuuray. Waxay ku qalabaysan yihiin rabitaan xor ah. Malaa'igta qoduuska ah waxay Ilaah ugu adeegaan sidii malaa'ig iyo wakiilo, waxayna u adeegaan jinniyo kuwa hela badbaadada, oo waxay la wehelin doonaan Masiixu markuu soo noqdo. Malaa'igaha caasiyiinta ah waxaa loo yaqaanaa jinniyo, jinniyo shar leh iyo jinniyo wasakh leh.
Qaabkeeda aasaasiga ah, axdi ayaa nidaaminaya xiriir wada-jir ah oo ka dhexeeya Ilaah iyo aadanaha si la mid ah sida axdi caadi ah ama heshiis uu u dhexeeyo xiriir ka dhexeeya laba qof ama in ka badan. Axdiga cusubi wuxuu dhaqan galay maxaa yeelay Ciise baayaabihii dhintay. Fahmitaanka tan waxay muhiim u tahay rumaystayaasha maxaa yeelay ...
Cibaadadu waa jawaabta rabbaaniga ah ee ammaanta Ilaah. Waxa lagu kiciyaa jacaylka rabaani ah waxayna ka soo baxdaa is-muujinta rabbaaniga ah ee abuurkiisa. Cibaadada, rumaystahu wuxuu galayaa wada xiriirka lala yeesho Ilaaha Aabbaha ah xagga Ciise Masiix, oo lagu dhex dhexaadiyo Ruuxa Quduuska ah. Cibaadadu waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaan ku qanacsan nahay oo ku faraxno Ilaah ...